FAA Yakanyengerwa Kuzivisa Boeing 737 MAX: Nyowani Federal Grand Jury Kupara mhosva
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » FAA Yakanyengerwa Kuzivisa Boeing 737 MAX: Nyowani Federal Grand Jury Kupara mhosva
Airlines • avhiyesheni • nhau • vanhu • chengetedzo • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Dare redzimhosva repamusorosoro muNorth District yeTexas radzosera gweta nhasi richibhadharisa aimbova Chief technical Pilot weBoeing Company (Boeing) nekunyengedza Federal Aviation Administration's Aircraft Evaluation Group (FAA AEG) maererano neFAA AEG kuongororwa kweBoeing's 737 Ndege yeMAX, uye kuronga kubiridzira vatengi veBoeing vekuUS - kuwana makumi emamirioni emadhora eBoeing.
Etihiopian Airlines uye Shumba Mhepo Kuuraya ane zita: Anopomedzerwa Boeing Chief technical Pilot Mark A. Forkner?
Musi waGumiguru 28, 2018, Shumba Air Boeing 737 MAX yakarova ikauraya 189.
Musi waKurume 10, 2019, Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX yakarova ikauraya 157.
Musi waGumiguru 14, 2021, Boeing Chief technical Pilot Mark A. Forkner akamhan'arirwa muUnited States nekunyengera iyo FAA mukubvumidza kupihwa mvumo kweBoeing MAX 737. Boeing yakachengetedza makumi emamirioni emadhora mune ino nzira yekuferefeta.
Sekureva kwemagwaro akapihwa mudare reNorth District yeTexas Federal Court, Mark A. Forkner, 49, aimbove weWashington State uye pari zvino weKeller, Texas, anonzi akanyengedza FAA AEG panguva yekuongorora kwesainzi uye kupihwa ndege kweBoeing 737 MAX.
Sezvakataurwa mumupomero, Forkner akapa iyo agency neruzivo rwekunyepa, zvisirizvo, uye ruzivo rwakakwana pamusoro pechikamu chitsva chekutonga kwendege kweBoeing 737 MAX inonzi Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Nekuda kwekunyepedzera kwake, gwaro rakakosha rakaburitswa neFAA AEG rakashaya chero chirevo cheMCAS. Nekudaro, zvinyorwa zvendege uye zvekudzidzira kutyaira ndege zveUS-zvakashomeka chero chirevo cheMCAS - uye vatengi veBoeing vekuUS airline vakatorerwa ruzivo rwakakosha pakuita nekupedzisa sarudzo dzavo kubhadhara Boeing makumi emamirioni emadhora 737 MAX ndege.
"Forkner anofungidzirwa kushandisa zvisina kufanira chinzvimbo chake chekuvimba nekuzvibata nemaune ruzivo rwakakomba nezveMCAS panguva yeongororo yeFAA uye chitupa che737 MAX uye kubva kune vatengi venhandare yendege yeBoeing," akadaro Assistant Gweta General Kenneth A. Polite Jr. weDhipatimendi reJustice's Criminal. Chikamu. "Mukudaro, akabvisa ndege nendege kubva pakuziva ruzivo rwakakosha nezve chikamu chakakosha chekutonga kwendege. Vanotonga senge iyo FAA vanoshanda rakakosha basa rekuona kuchengetedzeka kwevanhu vanobhururuka. Kune chero munhu anofunga kupara mhosva basa remudzvanyiriri, kupomedzerwa uku kunojekesa kuti Dhipatimendi Rezvemitemo rinoteedzera chokwadi ichi nekukupa mhosva. ”
"Mukuedza kuchengetedza mari yeBoeing, Forkner anonzi anonyima ruzivo rwakakomba kubva kune vanogadzirisa," akadaro Gweta Rinoshanda muU.S. Chad E. Meacham kuNorthern District yeTexas. "Kusarudza kwake kwakashata kwekutsausa FAA kwakatadzisa kugona kwesangano kudzivirira veruzhinji vari kubhururuka uye vakasiya vatyairi vengarava, vasina ruzivo nezvezvimwe 737 MAX zvekudzora ndege. Dhipatimendi rezvemitemo haribvumire kubiridzirwa - kunyanya mumaindasitiri ane mateki akakwirira. ”
"Forkner anonzi akabata ruzivo rwakakosha nezve Boeing 737 MAX uye akanyengedza iyo FAA, achiratidza kusaremekedza pachena mabasa ake uye kuchengetedzeka kwevatengi venhandare nevashandi," akadaro Assistant Director Calvin Shivers veFBI. "FBI icharamba ichiita kuti vanhu vakaita saForker vazvidavirire pamabasa avo enhema anokanganisa kuchengetedzeka kwevanhu."
"Hapana chikonzero chekunyengedza avo vanonyengedza vanodzora kuchengetedzeka nekuda kwemhindu yemunhu kana mukana wekutengeserana," akadaro Inspector General Eric J. Soskin weU.S. Department of Transportation. “Hofisi yedu inoshanda ichienderera mberi kubatsira kuchengetedza matenga akachengeteka pakubhururuka uye kuchengetedza ruzhinji runofamba kubva kunjodzi dzisina basa. Mhosva dzanhasi dzinoratidza kuzvipira kwedu kusingazununguki kushanda nevatevedzeri vemitemo pamwe nevemuchuchisi kuti vatore avo vanoisa hupenyu panjodzi. ”
Zvinoenderana nemagwaro edzimhosva, Boeing akatanga kugadzira nekushambadza iyo 737 MAX munaJune uye munaJune. FAA AEG yaive nebasa rekuona hushoma huwandu hwedzidzo yekutyaira inodikanwa kuti mutyairi abhururuse 2011 MAX yendege yeUS-based, zvichibva hunhu uye kukura kwemisiyano iri pakati pe 737 MAX uye yekutanga vhezheni yendege yeBoeing 737, iyo 737 Inotevera Chizvarwa (NG). Pakupera kweiyi ongororo, iyo FAA AEG yakaburitsa iyo 737 MAX Flight Standardization Board Report (FSB Report), iyo yaisanganisira, pakati pezvimwe zvinhu, misiyano yeFAA AEG-kudzidzisa kutsunga kwe737 MAX, pamwe neruzivo nezve mutsauko pakati pe 737 MAX uye iyo 737 NG. Ndege dzese dzeUS-dzinodiwa kuti dzishandise ruzivo rwuri mu737 MAX FSB Report sehwaro hwekudzidzisa vatyairi kuti vafambe nendege.
Sezvo Boeing's 737 MAX Chief technical Pilot, Forkner akatungamira iyo 737 MAX Flight technical Team uye aive nebasa rekupa iyo FAA AEG ruzivo rwechokwadi, rwechokwadi, uye rwakakwana nezve mutsauko uripo pakati pe737 MAX uye 737 NG yekuongororwa kweFAA AEG, kugadzirira, uye kuburitswa 737 MAX FSB Chirevo.
Mukati nekutenderera kwaNovember 2016, Forkner akawana ruzivo nezve shanduko yakakosha kuMCAS. Panzvimbo pekugovana ruzivo nezve shanduko iyi neFAA AEG, Forkner zvinonzi akaramba nemaune ruzivo urwu uye akanyengera iyo FAA AEG nezve MCAS. Nekuda kwekunyepedzera kwake, iyo FAA AEG yakabvisa zvese zvinongedzo zveMCAS kubva mune yekupedzisira vhezheni ye737 MAX FSB Report yakaburitswa muna Chikunguru 2017. Nekuda kweizvozvo, vatyairi vendege vanoburitsa 737 MAX yevatengesi veBoeing vekuUS - havana kupihwa ruzivo nezveMCAS mumabhuku avo uye zvekudzidzisa. Forkner akatumira makopi e737 MAX FSB Report kuBoeing's US-based 737 MAX vatengi vendege, asi akavharidzira vatengi ava ruzivo rwakakosha nezve MCAS uye 737 MAX FSB Report yekuongorora maitiro.
Musi kana muna Gumiguru 29, 2018, mushure mekunge iyo FAA AEG yaziva kuti Lion Air Flight 610 - 737 MAX - yakanga yapunzika padyo neJakarta, Indonesia, nguva pfupi mushure mekusimuka uye kuti MCAS yakanga ichishanda munguva pfupi pamberi petsaona, iyo FAA AEG yakawana ruzivo nezve shanduko yakakosha kuMCAS iyo Forkner yaakaramba. Mushure mekuwana ruzivo urwu, iyo FAA AEG yakatanga kuongorora uye kuongorora MCAS.
Musi kana muna Kurume 10, 2019, iyo FAA AEG ichiri kuongorora MCAS, iyo FAA AEG yakaziva kuti Ethiopian Airlines Ndege 302 - 737 MAX - yakanga yapunzika padhuze neEjere, Ethiopia, nguva pfupi ichangobuda uye kuti MCAS yakanga ichishanda munguva dzapfuura tsaona. Nguva pfupi yapfuura tsaona iyi, ndege dzese mazana manomwe nenomwe mazana manomwe dzakaiswa pasi muUnited States.
Forkner anopomerwa mhosva mbiri dzekubiridzira dzinosanganisira zvikamu zve ndege mumabhizimusi epakati nepakati uye ina dzenhamba dzehunyengeri. Anotarisirwa kuoneka kekutanga kudare nemusi weChishanu muFort Worth, Texas, pamberi peMagistrate Mutongi weUS Jeffrey L. Cureton weDare reDunhu reUS kuDunhu reKumaodzanyemba kweTexas. Kana akabatwa nemhosva, anotarisana nechirango chakakura chemakore makumi maviri mutirongo pane imwe neimwe nhamba yehuori hwekubiridzira uye makore gumi mutirongo pamutengo wega wega wekubiridzira unosanganisira zvikamu zvendege mumabhizimusi epakati. Mutongi wedare redzimhosva anoona chero mutongo mushure mekufunga nezveMitongo Yekutonga yeUS uye zvimwe zvinhu zviri pamutemo.
Iwo mahofisi emunda weChicago eFBI neDOT-OIG ari kuferefeta nyaya iyi, nerubatsiro rwemahofisi emunda eFBI neDOT-OIG.
Mutongi Gweta Cory E. Jacobs, Assistant Chief Michael T. O'Neill, uye Gweta Gweta Scott Armstrong weCriminal Division's Kubiridzira Chikamu, uye Gweta Rinobatsira weU.S.Alex Lewis weHofisi yeGweta reUnited States yeNorth District yeTexas vari kupomera nyaya iyi.
Imendi inongova mhosva, uye vapomeri vese vanofungidzirwa kuti havana mhosva kudzamara vaonekwa vane mhosva kudarika kupokana kunonzwisisika mudare remutemo.
Kopi yemhosva yechokwadi: